BIME: Rindrambaiko ho faharanitan-tsaina amin'ny serivisy amin'ny serivisy | Martech Zone
BIME: Rindrambaiko ho faharanitan-tsaina amin'ny serivisy amin'ny serivisy
Alakamisy Febroary 7, 2013 Alarobia, Febroary 6, 2013 Douglas Karr
Rehefa mitombo hatrany ny isan'ny loharanom-baovao, raharaham-barotra ny faharanitan-tsaina Mirongatra (indray) ny rafitra (BI). Ny rafi-pitsikilovana momba ny raharaham-barotra dia mamela anao hampivelatra ny tatitra sy ny dashboard amin'ny angona manerana ireo loharano ampifandraisinao. BIME dia rindranasa toy ny serivisy (SaaS) rafi-pitsikilovana momba ny raharaham-barotra izay mamela anao hifandray amin'ny tontolon'ny Internet sy ny eo an-toerana amin'ny toerana iray ihany. Mamorona fifandraisana amin'ireo loharanom-baovaonao rehetra, mamorona ary manaova fanontaniam-baovao ary jereo mora foana ny dashboard anao - ao anatin'ny interface interface tsara an'i BIME no misy azy.
Ny BIME dia afaka miasa ho toy ny "mpamaky mivantana", miasa lavitra sy amin'ny fotoana tena izy. Na izany aza, tsy mitaky anao hampiantrano ny angon-drakitrao ao anaty rahona. Na eo aza izany, ity safidy ity dia manana tombony maro: midira amin'ny datao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Miankina amin'ny haben'ny data, azonao atao ny mampakatra ny angon-drakitrao amin'ny Déjà Vu, BimeDB na Google BigQuery.
Amin'ny BIME dia manana mazava sy tsy miovaova ianao modely fangatahana manerana ny angonao rehetra. Apetraho anaty andalana sy tsanganana ireo "zavatra" tianao dia vita. Sivano avy eo na sasao izy ireo. Vondron-javatra mavitrika ny zavatra, sivana araka ny fitsipika sarotra na refeso ny fiantraikan'ny fanovana amin'ireo isa hafao.
Miaraka amin'ny BIME dia afaka mamorona ianao sary an-tsary mifandray izay hanasongadinana ireo fironana sy lamina miafina ao amin'ny data-nao. Azonao atao ny mamolavola azy ireo amin'ny alàlan'ny fanivanana ireo andian-dahatsoratra na amin'ny famoahana ireo angona ifotony. Ny zava-drehetra dia natao hanehoana ny habetsaky ny fampahalalana amin'ny habaka ambany indrindra. Azonao atao ny manararaotra ny fandefasana loko sy ny habe ohatra, na milalao amin'ny safidin'ny fanamboarana tabilao isan-karazany.
Ampitahao ny Malagasy Analytics tahirin-kevitra amin'ny biraonao any aoriana, refeso ny ROI fampielezanao tena mifanaraka amin'ny teti-bolanao. Ao anaty solaitrabe tokana. Amin'ny fampiasana ireo toetra sy refy voatanisa ao amin'ny BIME, ny variable global, ny vondrona, ny set ary ny mpikambana voatanisa hafa dia azonao jerena avy amin'ny zoro rehetra.
Vohay ny herin'ny angon-drakitra federated miaraka amin'ny QueryBlender. Afaka manontany loharanom-pahalalana am-polony maro ny mpampiasa ary mahatakatra izany - na inona na inona endrika fiteny, rakitra ary endrika metadata. QueryBlender dia mamela ny mpampiasa hifangaro sy hampifanaraka ny vaovao saika rehetra, manomboka amin'ny takelaka nolovaina sy ny tahiry ifandraisana lehibe ka hatramin'ny data mivantana avy ao amin'ny Google Analytics, Google Apps, salesforce.com, na Amazon Web Services.
Vondron-javatra mavitrika ny zavatra, sivana araka ny fitsipika sarotra na refeso ny fiantraikan'ny fanovana amin'ireo isa hafao. BIME ny motera fanaovana kajy manana ny zavatra rehetra ilainao, ary bebe kokoa aza. Aza matahotra manoratra kaody; manana interface tsara ho an'ny mpampiasa izahay amin'ny famoronana kajy mahazatra indrindra. Ny safidy aorian'ny fanodinana dia hamonjy anao ora maro ary hamela anao hahatratra kajy iraisana nefa tsy manoratra raikipohy iray.
rehetra BIME ny lisansa dia manomboka amin'ny dashboard 20, fifandraisana data 10, mpamorona 1 ary mpijery dashboard tsy voafetra.
Tags: Amazon Web ServicesBigQueryBimeDBraharaham-barotra ny faharanitan-tsainaEfa hitaGoogle Analyticsgoogle appsGoogle BigQuerysalesforce.com
Tatitra Benchmark Marketing B2012B 2
Famahanana ny votoatin'ny biby miaraka amin'ny Rallyverse